कार्यमा कलहरू - तपाईंको वेब पृष्ठमा केवल बटनहरू भन्दा बढि | Martech Zone
कार्यमा कलहरू - तपाईंको वेब पृष्ठमा केवल बटनहरू भन्दा बढि
बिहीबार, अक्टुबर 1, 2015 बिहीबार, अक्टुबर 1, 2015 डस्टिन क्लार्क
तपाईंले जताततै मन्त्रा, नारा र इनबाउन्ड मार्केटर्सको मोटोहरू सुन्नुभयो: “सामग्री भनेको राजा हो! "उपभोक्ता-चालित, मोबाइल मैत्री, सामग्री केन्द्रित डिजिटल मार्केटिंगको युगमा, सामग्री लगभग सबै कुरा हो। लगभग रूपमा लोकप्रिय Hubspot'इनबाउन्ड मार्केटिंग दर्शन' उनीहरूको अर्को च्याम्पियन कारणहरू हुन्: कल-टु-एक्शन वा CTA।
तर तपाईको हतारमा चीजहरू सजिलो बनाउन र वेबसाइटमा यसलाई प्राप्त गर्नुहोस्! के को चौड़ाई बेवास्ता नगर्नुहोस् कल-टु-एक्शन वास्तवमै छ। यो केवल एक उपयोगी बटन भन्दा बढि हो - स्मार्ट वा अन्यथा - जुन तपाईंको ईमेलहरूमा, ब्लगहरू र अवतरण पृष्ठहरूमा बस्दछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको छनौटको गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ।
भर्खरको प्रकाशनमा, सामग्री प्रबर्धनको लागि एक मार्केटरको गाईड, एलिमेन्ट थ्री (मेरो नियोक्ता) ले कन्भर्टेड मिडिया दृष्टिकोण कसरी विस्तृत गरे - त्यो भनेको स्वामित्व प्राप्त, कमाएको र भुक्तान गरिएको मिडिया प्रयोग गरी - सामग्री प्रचार गर्नको लागि त्यो सामग्रीको सफलता महत्वपूर्ण छ। EBook मा, हामी कसरी CTA ब्यानर र बटनहरू प्रचारको लागि महत्वपूर्ण स्वामित्व मिडिया तत्व हो भनेर विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछौं।
तर त्यहाँ बटनहरू र ब्यानरहरू बाहेक सीटीएसँग अझ बढी छ। थप तीन गोप्य उदाहरणहरू सिक्नको लागि पढ्नुहोस् जहाँ तपाईं आफ्नो सामग्री प्रमोट गर्न हत्यारा कल-टु-एक्शन क्राफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
खेल्न भुक्तान गर्नुहोस्
यो कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन कि मीडियालाई तपाईंको सामग्रीमा नयाँ आँखा पाउनको लागि एक प्रभावकारी विधि छ - स्वास्थ्य बीमा कम्पनीसँग एक नियन्त्रण परीक्षणमा, E3 ले मात्र भुक्तान पदोन्नतीको कारण लगभग %००% को ट्राफिकमा वृद्धि देख्यो! तर जब मार्केटरहरूले भुक्तान गरिएका च्यानलहरू - पीपीसी, प्रदर्शन, पुनःबजारीकरण र सामाजिक अपनाउँछन् - एक तत्व जुन सामान्यतया असुविधाजनक हुन्छ सन्देश हो।
तपाइँको विज्ञापन पाठ तपाइँको भुक्तान प्रयासहरु को एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हो - ती मात्र खोज विज्ञापन वा प्रदर्शन विज्ञापन सन्देश पठाउन। विशेष कार्य भाषा सहित - अधिक पढ्नुहोस् र हेर्न क्लिक गर्नुहोस् - तपाईंको विज्ञापन प्रतिलिपिमा क्लिक हटाउन आवश्यक छ। सबै पछि, तपाइँले अफर रूपान्तरण प्राप्त गर्नु अघि तपाइँले विज्ञापन क्लिक प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
त्यो यति मेटा हो
हामी सामान्य प्रयोगकर्ता-नियन्त्रित वेबसाइट संकेतहरू, जस्तै मेटा वर्णन, पृष्ठ शीर्षक र हेडलाइन ट्यागहरूलाई वेवास्ता गर्ने युगमा छौं। यो पर्याप्त छैन गुगलले स्पष्ट रूपमा हाम्रो वेबसाइटलाई श्रेणीकरण गर्न यी सals्केतहरू कसरी प्रयोग गर्दछ भनेर बताएको छ, तर यी उपेक्षित संकेतहरूले तपाईंको प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्नका लागि लुकाउन प्रभावकारी पनि छ - र तपाईंको क्लिक-थ्रु।
[बक्स प्रकार = "सफलता" align = "" वर्ग = "" चौड़ाई = "90%"]गोप्य: उचित प्रयोगले तपाईको एसईओ स really्केतलाई वास्तवमै बढावा दिदैन, तर तिनीहरूको अनुपस्थिति स्पष्ट संकेत हो कि तपाइँको वेबसाइटले ख्याल राख्दैन र सर्च इञ्जिनहरूले बेवास्ता गर्नुपर्दछ। [/ बक्स]
तपाईको ढोकाबाट आउने लगभग सबै क्लाइन्ट र सम्भाव्यताको लागि यो साझा समस्या हो: तिनीहरूको मेटा डाटा खराब गरीएको छ। खराब गरीयो = हराइरहेको छ, धेरै लामो, नक्कल सामग्री वा बस गलत गलत। किन यो कुरा गर्छ? किनभने यो तपाईंको रैंकिंग, यातायात, र रूपान्तरण मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ।
मलाई थाहा छ तपाईं के भनिरहनु भएको छ। आऊ, यार। गुगलले पहिले नै भनेका छन कि उनीहरू खोज रैंकिंगका लागि मेटा वर्णन प्रयोग गर्दैनन्। र तपाईं सहि हुनुहुन्छ। तर गुगलले के विचार गर्दछ तपाईंको खोज इञ्जिनबाट तपाईंको पृष्ठमा दर मार्फत क्लिक क्लिक गर्दछ - र तपाईसँग एक र केवल यो मात्र नियन्त्रण तपाईको मेटा शीर्षक र वर्णन हो। यी संकेतहरू तपाईंको संभावनाहरू, सम्भावित साइट आगन्तुकहरू र तपाईंको अर्को बिक्रीको लागि कार्य गर्न स्पष्ट कलहरू हुन्।
अझै पक्का छैन? आकारका लागि यो प्रयास गर्नुहोस् - सफ्टवेयर क्लाइन्टको मामलामा, एलिमेन्ट थ्रीले गुगलबाट उनीहरूको वेब पृष्ठहरूमा क्लिक थ्रु थ्रेड दर (CTR) १ 15% ले बढाइयो - मेटा शीर्षक र वर्णन मात्र अपडेट गरेर। त्यो सबै होइन - यहाँ total कुल कुञ्जी मेट्रिक्सको सूची छ जुन यी मात्रको साथ सुधारिएको थियो
क्लिकहरू - सुधार 7.2.२%
CTR - सुधार 15.4.२%
आगन्तुकहरूको संख्या - सुधार 10.4.२%
नयाँ आगन्तुकहरूको संख्या - सुधार 8.1.२%
बाउन्स दर - सुधार 10.9.२%
[बक्स प्रकार = "नोट" align = "aligncenter" वर्ग = "" चौड़ाई = "% ०%"]पाठ: तपाइँको नियन्त्रणमा वेबसाइट संकेतहरू बेवास्ता गर्न रोक्नुहोस् - लुकाइएको "मेटा" पनि। तिनीहरू Google लाई फरक पर्दछ। उनीहरूका प्रयोगकर्ताहरूमा फरक पर्दछ। तिनीहरूले तपाइँलाई फरक पर्दछ। [/ बक्स]
मिलेनियमको सामाजिक घटना
सामाजिकमा गोप्यता छ - फोटोहरू सहितको पोष्टहरू अधिक मनपर्दो र अधिक रिट्वीट बाहेकका भन्दा
र भर्खरको सामाजिक प्लेटफर्महरू लगभग पूरै फोटो संचालित हुन्छन्, इन्स्टाग्रामबाट टिन्डर सम्म।
तर कत्तिको समय तपाईले तस्विर रोज्नु भएपछि सन्देश क्राफ्ट गर्नका लागि मात्र खर्च गर्नुभयो? तपाइँको सामाजिक मिडिया पोष्टहरूमा तत्काल र कार्य सिर्जना गर्न आवश्यक छ, र एक राम्रो-शिल्प गरिएको CTA सुरुवात हो, अन्त्य होइन।
तपाइँ प्रयोगकर्ताहरू के गर्न चाहनुहुन्छ, विचार गर्नुहोस्, कसरी तपाइँ तिनीहरूलाई गर्न चाहनुहुन्छ, र कहिले। निश्चित गर्नुहोस् कि यी केही फिट छन् - तपाईंको पोष्टको चरित्र गणनाले फरक पार्दैन।
अवश्य पनि, तपाईं आफ्नो छवि र भिडियोहरूमा पनि कार्य सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ उत्पादनहरूका फोटोहरू, प्याकेजहरू खोल्ने व्यक्तिहरू, चम्किलो नयाँ सुविधाहरू - सूची प्रभावकारी भिजुअलहरूको लागि अगाडि बढ्छ।
भिडियोले तपाईंको संभावनालाई बेच्न अझ बढी अवसर प्रदान गर्दछ। तपाईंको भिडियो साइनअफ र गुडबायमा स्पष्ट कल-टु-एक्शन समावेश गर्नुहोस्। प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको ख्याल राख्नुहोस्, तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ र जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ।
यसलाई उच्च र कडा राख्नुहोस्
अन्तमा, याद गर्नुहोस् कि तपाई मोबाइल मोबाईलमा हुनुहुन्छ। साधारण भनेको कम सामग्रीको मतलब हुँदैन - तर यसको मतलब तपाईंको प्रयोगकर्ताहरू र अन्तिम लक्ष्यको बिच कम आवाज। तपाईको कलहरूलाई कार्यमा छरितो र अक्सर प्रयोग गर्नुहोस्। धेरै पटक, हामी हाम्रो बटनहरू, कार्यहरूको शब्दहरू र पृष्ठको तल ठूलो भुक्तानी बन्द गर्दछौं।
यसको सट्टामा, यो निश्चित गर्नुहोस् कि क्विड प्रो Quo अगाडि र बीचमा छ - वा कम्तिमा गुना भन्दा माथि। तपाईंको सन्देशलाई विन्दुमा राख्नुहोस्। सिक्नुहोस्, पढ्नुहोस्, र कल गर्नुहोस्, र तपाईंको अफरको मासुमा छिट्टै पाउनुहोस् जस्ता कार्य क्रियाहरू प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं यी दिशानिर्देशहरू सबै माथिका CTA उदाहरणहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ - ब्यानर, बटनहरू, सशुल्क खोज (कम चीजहरूमा बढी बोलपत्र - यदि तपाईं जित्न सक्नुहुन्न भने, यो यसमा बिडिंग गर्न लायक छैन ...), प्रदर्शन र सशुल्क सामाजिक विज्ञापन, भिडियो , सामाजिक सन्देश, र तपाईंको मेटा जानकारी।
तपाईंको कपीराइटरलाई एक पेयको लागि बाहिर लैजानुहोस्, उसलाई दिनुहोस् कि उसलाई राम्रो पदको पदोन्नति दिइएको छ, र काममा लाग्नुहोस् - आफ्ना शब्दहरू राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको कल-टु-एक्शन र तपाईंको ग्राहकहरूले तपाईंलाई पछाडि माया गर्नेछन्।
टैग: कार्यलाई कल गर्नुहोस्कार्य गर्न प्रासंगिक कल
डस्टिनले डिजिटल रणनीति लीडको लागि काम गर्दछ एलिमेन्ट तीन, आफ्नो अनुभव को उपयोग अनलाइन मार्केटिंग अभियानहरु फार्चुन 500 र स्थानीय साना व्यवसायहरु को लागी चलाउन।
अक्टूबर २१, २०१ at २:०2 बिहान
धन्यबाद @markettechblog र @dustinclark धेरै उपयोगी सल्लाह। विशेष गरी तपाइँको वेबसाइट मेटा डेटा टिप्पणीको साथ सहमत गर्नुहोस्। जस्तो कि तपाईलाई थाहा छ तपाईको मेटा डाटा (उदाहरणका लागि वेबसाइट वर्णनकर्ता) तपाईको ब्रान्डको विज्ञापन प्रतिलिपि हो जुन वेबमा खोज ईन्जिनको माध्यमबाट हेरिएको थियो। जस्तो कि यो ठीक हुनु पर्दछ र राष्ट्रपति भाषणको जस्तो शिल्प गरिएको हुनुपर्छ। You तपाईले भनेको जस्तो धेरैजसो कम्पनीमा असन्तुष्ट हुन्छ त्यसैले यो तत्काल द्रुत विजय हुन सक्छ। Altaire मा हामी अब आफ्नो क्रिसमस ईमेल अभियान मा ईमेल विपणकहरु संग काम गरीरहेका छौं सबै घटनाहरूको लागि तयारी र परीक्षण मद्दत गर्न। तर यदि वेबसाइटहरू तयार छैनन् पनि अवसरहरू खेर फाल्न सकिन्छ। म तपाईंको सुझावहरूमा पास गर्दछ।